Cuntada: Mozenda Data Extractor - Qalabka ugu fiican oo la isku halleyn karo
Mozenda waa adeeg dhamaystiran shabakad adeeg ah adeeg; waxaa ugu wanaagsan in la ogaado sifooyinka wanaagsan iyo awoodda ay u leeyihiin inay qabtaan hawlo kala duwan. Kumbuyuutarkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka soo rogto waxyaabaha ka soo baxa Aliexpress. Boohoo. com, Amazon, iyo eBay. Waxaad kaydin kartaa faylasha Dropbox iyo Google Drive, ama si toos ah ugu soo dhawow diskkaaga.
Sidee Mozenda uga shaqeyneysaa?
Mozenda wuxuu qabtaa shaqadiisa qaabka soo socda:
1. Waxay ka dhigtaa xogta laga helo goobo badan. Marka hore, Mozenda waxay tilmaamaysaa qaababka xogta.
2. Tallaabada xigta, waxay isku daraysaa xogaha xogta.
3. Marka seddexaad, Mozenda waxa ay natiijooyinka u soo gudbinaysaa laba adeeg oo kaydka waawayn leh: Dropbox iyo AWS.
Mozenda Web Console iyo Agent Builder
1. Mozenda Web Console - Codsigaani wuxuu noo fasaxayaa in aan maamulno wakiiladayada (mashaariicda xoqista). Waxaan sidoo kale arki karnaa oo abaabuli karnaa natiijooyinka waxaanna dhoofinaa xogta la soo saaro CSV iyo JSON.
2. Agent Builder - Waa codsi Windows ah oo loo isticmaalo in lagu dhiso mashaariic tiro badan oo ka mida mashaariicda.
Noocyada kala duwan ee Mozenda:
1. Software-ka-dhan-mid-mid ah:
Mozenda waxaa ugu wanaagsan ee loo yaqaan interface-user-saaxiibtinimo. Ma aha oo kaliya soo saaraha shabakadda laakiin sidoo kale waa cirbad; Isticmaalkani wuxuu adeegsanayaa dhir kala duwan si uu u rogrogo bogagga shabakadda. Waxay marnaba ka dhigi kartaa xogta laga helo bogagga la mamnuucay, oo kaliya waa inaad muujisaa URL si aad u heshid isla markiiba. Waxaa intaa dheer, waxay bixisaa spam difaac oo hagaajiya dhammaan khaladaadka yar ee ku jira mawduucaaga.
2. U qalmida ganacsiyada yaryar:
Sida bilawga ah, waxaa suurtagal ah inaadan suurtogal aheyn inaad ku maalgashato qiimaha waraaqaha xogta ama mashiinka webka. Si kastaba ha ahaatee, Mozenda waa software bilaash ah oo si habboon u fulin kara hawlaha aadka u adag. Waxay falanqeynaysaa dukumiintiyada webka, waxay ururiyaan macluumaadka ku saabsan tartamayaasha, isbeddellada ugu dambeeyay, suuqyada soo baxa, waxayna ku siinayaan natiijooyin aad ku heshay arin yar. Mozenda waxay u fiicantahay shaqaalaha xorta ah iyo ganacsiyada yaryar mana u baahnid inaad haysato xirfadaha codeynta ama barnaamijka.
3. Isku duub bogga oo dhan:
Haddii aad raadineyso inaad soo xirtid bogga oo dhan, Mozenda waa xulasho sax ah. Cilmi-baadhayaashu waxay u baahan yihiin inay helaan macluumaad ka soo jeeda joornaalada iyo buugaagta e-buugga si ay u sameeyaan tijaabooyinkooda. Qalabkani wuxuu ka caawiyaa ururinta xogta tayada leh iyo tayada leh, shirkaduhuna waxay isticmaali karaan Mozenda si ay u bilaabaan una iibiyaan alaabooyin kala duwan.
4. Wanaagsanaanta wacyigelinta caanka ah:
Haddii aad soo bandhigtay calaamad ama aad rabto inaad kor u qaaddo alaabtaada iyo adeegyada internetka, waa inaad isticmaashaa Mozenda. Iyada oo adeeggan ee adeega adeega, waxaad si sahlan u ururin kartaa xogta, qabashada dhowr tijaabo ah iyo kormeerida tayada dukumiintiyadaada. Sidoo kale, qalabkani wuxuu ka caawiyaa abuurista jihooyin dheeraad ah oo kobciya astaantaada saxaafadda bulshada si karti leh oo karti leh. Marka la soo gaabiyo, waxaad ku korin kartaa ganacsigaaga adoo adeegsanaya software-kani waxana uu beegsan karaa macaamiisha mustaqbalka ee adduunka Source .